Saxaafadda Talyaaniga oo sheegtay in Covid-19 uu dhaqan geliyey waxyaabo badan oo ka mid ah ”DIINTA ISLAAMKA!” (Akhri yaabkaan) | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada Saxaafadda Talyaaniga oo sheegtay in Covid-19 uu dhaqan geliyey waxyaabo badan oo...
(Roma) 30 Maajo 2020 – Saxaafadda Talyaaniga ayaa qortay in masaafadii ay ahayd inay dadku isu jirsadaan dhanka ragga iyo dumarku, sida ay qabto Diinta Islaamku ay iminka noqotay midda la raacayo Covid-19 dartiis.
Waxyaabaha lasoo rogey waxaa ka mid ah gafuur-saab daboolaya inta badan wejiga, shumiska, gacan qaadka ama salaanta ayaa waxaa laga mamnuucay dadka, xitaa naadiyada lagu caweeyo (night clubs) iyo meelaha khamriga lagu fuudo (pups) ayaa laga joojiyey arrimahaasi.
Weliba ku darsoo meelahaasi waa la xirey xilliyadii uu cudurku ugu darnaa, dalalka qaarna weli waa ka xiran yihiin, taasi waxay yaraysay in jidadka lagu arko dad cabsan.
Waxaa Covid-19 dartii Galbeedka ka baaba’ay raggii iyo dumarkii isku dheg dhegi jirey ee lagu arki jirey goobaha dadwaynaha, iyadoo iminka uu qofba midka kale u jirsanayo 1.5 mitir.
La Luce ayaa sheegay in nidaam bulsheedkan cusub ee uu karuunuhu keenay uu dhaqan geliyey wax badan oo ka mid ah shareecada Islaamka.
Previous article4 ASTAAMOOD oo adiga oo aan dhakhtar aadin aad ku garan karto inuu liito DIFAACA JIRKAAGU (Qaybtii 2-aad)
Next articleSomalia: Democracy in transition